မြရွက်ဝေ: င၊ မောင်၊ ကို မှ ဆရာသို့
Posted by မြရွက်ဝေ at 6:38 PM
စာရေးဆရာ ကြူရတနာ မောင်မြကြိုင် တဲ့လား။
အရေးအသားက ဆရာသိပ္ပံမောင်ဝ styleနဲ့ အတော်ဆင်တယ်နော်။ ဆရာဝရဲ့ စာတွေဖတ်ပြီးကြီးလာ
တာဆိုတော့ ဒီလိုstyle ရေးတာကို အရမ်းကြိုက်သဗျ။
၀တ္ထု လာဖတ်တယ်.. ကျေးဇူးပဲ မဝေ ..
မီက အစက ဦးဖိုးကျား ရေးတာ လို့ ထင်နေတာ .. နောက်မှ အသုံးလုံး ဆိုတော့ ဦးဖိုးကျား မမီဘူး၊ ဘယ်သူရေးလဲ မသိဘူး လို့ တွေးနေတာ။
စေတနာ ၀ါသနာကောင်းရှင်လေးတွေကို လွမ်းသွားပြီ . . . သူတို့လဲ ခုထိ ရှိနိုင်ပါစေ လို့ .. .
ဒါနဲ့ .. ဆွဲထားတဲ့ ပုံက မျက်စိရှုပ်တယ် လို့ ပြောပြောစ စောပါတယ် :D
မူးသွားလား .. ဆောရီးနော်.. ဒီတစ်ခါ မျက်လုံးအေးလောက်တာလေး တင်ကြည့်မယ်.. .
ဖတ်သွားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရွာသားတွေကို စာခေါ်သင်ပေးတော့လည်း အဲလိုပဲ။ ထမင်းကျွေးပါ့မယ် ဘာညာနဲ့ ချော့ပြီး ခေါ်သင်ရတယ်။
ညီမလေးရေ.. ၀တ္ထုတိုဖတ်ရတာ ကောင်းလိုက်တာ.. နောင်လည်း တင်ပေးဦးနော်.. :)
simple and nice story!! Thanks for sharing.
၀တ္ထုလေးအတွက် ကျေးဇူးတင်တယ် မြရွက်ဝေ…။ အရမ်းဖတ်လို့ကောင်းတယ်။